ကုိကုိ ကုိကုိလုိ႔ ေခၚခ်င္လုိ႔ (ကုိကုိေတြပဲ ေရြးလုိက္ပါ)
21 Nov 2016 . 1:13 PM
ကိုကို ကိုကိုလို့ ခေါ်ချင်လို့
ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံးအချစ်ကို လိုချင်မိပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချစ်ကိုပဲ တောင့်တကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အသက်ငယ်တဲ့ မောင်လေးတွေဆီမှ အချစ်ကို မျှော်လင့်ကြပေမယ့် မိန်းကလေးတွေဘဝမှာ တစ်သက်မှာတစ်ခါတော့ ကိုကိုကြီးများနဲ့ ပတ်သက်ဖူးကြပါတယ်၊ ဟုတ်တယ် ဟုတ်။ ကိုကိုကြီးတွေကို ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ လောကကြီးအကြောင်း ပိုနားလည်တယ်။
ကိုကိုတွေဟာ လောကကြီးမှာ အတွေ့အကြုံစုံလင်လှသည်နည်းတူ ဘယ်ကွေ့မှာ ဘယ်တက်နဲ့လှော်ရမယ်ဆိုတာ ပိုပြီးနားလည်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝအတွက် လှေကားထစ်သဖွယ် ရှေ့တက်လမ်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ကျောထောက်နောက်ခံကျေးဇူးရှင်ကြီးများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကောင်းအဆိုး ၊ အကြောင်းအကျိုးများကို နည်းလမ်းတကျ ကူညီဖေးမပြီး ကိုယ့်ဘဝအတွက် လမ်းပြကြယ်များ ဖြစ်နေပါတယ်။
ရည်းစားသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာပေါ်လာတိုင်း ကိုယ့်အပေါ်ချည်း အပြစ်ပုံချတတ်တဲ့ ရည်းစားမျိုးကို ဘယ်မိန်းကလေးကမှ လိုချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုတွေကတော့ ပြဿနာတိုင်းအတွက် တာဝန်ယူဖြေရှင်းလိုစိတ်အပြည့်ဖြင့် ကူညီသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာရပ်တိုင်းကို ခေါင်းအေးအေးဖြေရှင်းလိုစိတ်ရှိပြီး အမှားအမှန်ကို တိကျပြတ်သားစွာ စွမ်းဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုကိုတွေဟာ အကွက်ကျကျလုပ်ဆောင်တတ်သူများပီပီ ရည်းစားဖြစ်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဘဝရှေ့ရေးအတွက် ငွေးကြေးစုဆောင်းမှုများ စတင်နေပါပြီ။ ငွေကြေးကိစ္စအတွက် ပူစရာမလိုတဲ့အတွက် အိမ်ထောင်ရေးချစ်ခရီးမှာလည်း သာယာချောမွေ့နေပါပြီ။ ငွေရေးကြေးရေးမပူချင်ရင်တော့ ကိုကိုကြီးတွေများကို လက်တွဲလိုက်ပါနော်။
ကိုယ့်ထက် အသက်ငယ်တဲ့ “မောင်” ကို ရွေးချယ်မိရင် ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ မိုက်ရူးရဲဆန်တာတို့ ၊ ကလေးဆန်တာတို့ လုပ်တတ်ပြီး စိတ်မချမ်းမမြေ့ဖြစ်စရာတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အတွေးအခေါ် ရင့်ကျက်တဲ့ ကိုကိုတွေကသာ ပြဿနာတိုင်းကို ခေါင်းအေးအေးနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ရုံသာမက ကိုယ့်အတွက် “စီးတဲ့ရေ ဆယ်တဲ့ကန်သင်း” သဖွယ် ဘဝအရှင်သခင် အိမ်ဦးနတ်ကြီးများ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အိမ်ထောင်ရေး သုခပြည့်စုံမယ်။
ဒီအချက်ကတော့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝသာမက လင်မယားနှစ်ယောက်ဘဝမှာပါ ပြည့်စုံချမ်းသာစေပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် လိုချင်တဲ့စည်းစိမ်အမျိုးမျိုးကို အတွေ့အကြုံများသူပီပီ လက်တွဲခေါ်ဆောင်သွားရင်း ချစ်ဗိမာန်ကို နှစ်ကိုယ်တူူ လှမ်းကိုင်နိုင်ပါပြီ။ ချစ်ခုန်တိမ်းမူဖွယ် အတွေ့အထိတွေနဲ့ သာယာဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဖဲမွေ့ယာထက်မှာ အချစ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ဆိုရင် ကိုကိုတွေကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်ပါနော်။
by Ju Jue . 50 mins ago
by Htet Htet . 18 hours ago